'केपी जी सभा कस्तो हुन्छ देख्नुभयो ? प्रतिगमनविरुद्ध सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्ने आन्दोलन गर्न नपरोस्' - Vishwanews.com
'केपी जी सभा कस्तो हुन्छ देख्नुभयो ? प्रतिगमनविरुद्ध सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्ने आन्दोलन गर्न नपरोस्'
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रतिगमन विरुद्धको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम नसच्चिए सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्नका लागि अर्को ओन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
काठमाडौंमा प्रचण्ड माधव पक्षले आयोजना गरेको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘सभा कस्तो हुन्छ ओलीले भन्नुभयो केपी जी सभा कस्तो भयो देख्नुभयो? विरोध कस्तो हुन्छ? हामी आज यहाँ साथीहरूको जानकारी अनुसार ५ लाख हाराहारी उपस्थित भएका छौँ।’